सभापति देउवाद्वारा डा. केसीका मागप्रति गम्भीर हुन आह्वान « प्रशासन
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेकाक छन्।
सभापति देउवाले आज एक विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति थप बिग्रंदै गएको खबरले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकार वार्तामार्फत समाधानका लागि गम्भीर नहुनुलाई झनै गम्भीर विषयका रुपमा लिएको बताएका छन् ।
सभापति देउवाले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गरी उहाँका माग सम्बोधन गर्दै उनको जीवन रक्षाका लागि तत्कालै अग्रसरता लिनु सरकारको दायित्व रहेको स्मरण गराएका छन् ।
शासन सञ्चालन क्रममा सरकारले विवेकको मार्ग अख्तियार नगर्दा त्यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने उल्लेख गर्दै उनले डा. केसीको जीवनमा तलमाथि हुनसक्ने परिस्थितिको निर्माण वर्तमान सरकारले नियतवश गरिरहेको गम्भीर आशंका उब्जिएको बताएका छन् ।
डा. केसी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै १७ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत छन् । उनको यो १५ औँ आमरण अनशन हो । यता काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा डा केसीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेको छ । रासस